लियोनोरले समुदायमा सनशाइन ल्याउँदछ
lending8 मा अगस्ट 27, 2014 द्वारा लिखित।
कसरी समुदायमा राम्रो स्वास्थ्य प्रबर्धन गर्न लियोनोरले Lending Circles एक व्यवसाय सुरू गर्न प्रयोग गर्‍यो भनेर फेला पार्नुहोस्
जब सम्म लियोनार गार्सिया सम्झन सक्दछ, उनको जीवनमा प्रेरणा शक्ति उनको समुदायलाई सहयोग गर्ने थियो। उनी एल साल्भाडोरमा सानी केटी भए पनि लियोनोर भन्छिन् उनीसित सधैं व्यवसायको बारेमा गहिरो अनुभूति थियो, तर उनले आफ्नो छेउछाउका मानिसहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन भने।
उनी एक विशाल तम्बाकू फार्ममा हुर्केकी थिइन् जुन उनका बुबा र आमाको जिम्मामा थिए। छेउमा, उनकी आमाको एउटा सानो पसलको स्वामित्व छ जुन खेतमा काम गर्ने पुरुषहरूका लागि खाना, पेय पदार्थ र अन्य चीजहरू बेच्दछ। लियोनोर आफ्ना सबै समय बुबासँगै ट्याग गर्नमा खर्च गर्छिन् किनभने उनले खेतहरू निरीक्षण गर्थे, मजदुरहरूलाई व्यवस्थापन गर्थे र बाली लगाउँथे। बढ्दो मौसम समाप्त भएपछि, उनी आफ्नी आमासँग जाउँछिन् र उनीले बिक्री मूल्य र विभिन्न कम्पनी र स्टोरहरू सम्झौता हेरिन्न् जुन तम्बाकू खरीद गर्न चाहन्थे।
लियोनोरले व्यापार र उत्पादनहरू र पैसाको बिचको सम्बन्धको बारेमा धेरै कुरा सिकेकी थिइन, तर उनले यो पनि सिके कि समुदायको लागि काम गर्दा ठूलो इनाम पाइन्छ।
लियोनोर स्थानीय स्कूलमा शिक्षक बन्न गए। उनको लागि, बच्चाहरूलाई सिकाउनु सपनाको काम थियो। उनले विद्यालयको प्रधानाध्यापक बन्नको लागि काम गर्छिन्। यस समयमा, लियोनोरले उद्यमशीलताको सपना जिवित राख्यो एउटा अत्यधिक सफल किराना स्टोरको स्वामित्व र चलाएर। उनी शिक्षणबाट अवकाश पाए पछि उनले यो निर्णय गरिन् कि पसल बेच्ने पनि समय आयो। लियोनोरलाई नयाँ साहस चाहिएको थियो र कहाँ फेला पार्ने त्यो उनलाई थाहा थियो। उनीलाई थाहा थियो कि अमेरिकामा उनीसँग व्यापार बढाउन बढी अवसर र बढी स्वतन्त्रता हुनेछ।
२००१ मा अमेरिका सरे पछि, लियोनर तुरुन्त नयाँ व्यवसाय शुरू गर्न चाहन्थे, तर उनी ब्लक भइन्। जब उनी aण लिन गइन्, उनीलाई अस्वीकार गरियो किनभने उनीसँग कुनै क्रेडिट थिएन। लियोनोरका लागि त्यो अनुहारमा थप्पड थियो। उनले स्कूल चलाउने क्रममा एल साल्भाडोरमा अत्यधिक सफल व्यवसाय चलाएको थियो। उनी पनि हुर्किएकी थिइन र आफ्ना आमाबाबुबाट आफूले सकेजति सबै सिकेर।
लियोनोर हार मान्दिनन्, तर उनीलाई पैसा कमाउने र क्रेडिट बनाउनको लागि भरपर्दो तरीकाको आवश्यक पर्‍यो। त्यो बेला जब उनले आफ्ना एक साथी मार्फत Mission Asset Fund पत्ता लगाइन। उनी एक माइक्रो loanण प्राप्त गर्न र भविष्यको लगानीको लागि उधारो बनाउन सक्षम भइन्। णले उनलाई जेनेरेटर खरीद गर्न, तखता र अन्य चिकित्सा उपकरणहरू प्रदर्शन गर्न उनको ब्यापार खोल्न मद्दत गर्‍यो, लियोनोर प्रकृति सनशाइन।
लियोनोरको प्रकृति सनशाइन एक व्यवसाय हो जसले लियोनोरको इच्छाको आधारमा बनेको छ जसले मानिसहरूलाई स्वस्थ जीवन जीउन सहयोग गर्दछ।
उनीले भर्खरको प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादनहरू, सप्लीमेन्टहरू, डायग्नोस्टिक टेस्टहरू र होमियोपैथिक उपचारहरू जनताको आवश्यकताको लागि प्रदान गर्दछ। उनको कुर्सीमा केही मिनेट र लियोनोरले तपाईंलाई बिरामी रूपमा के गर्दछ र यो कसरी ठीक गर्ने ठीकसँग थाहा पाउनेछ! लियोनोरले किफायती उत्पादनहरू खोज्नमा विश्वास गर्दछ जसले समस्याको जरा र सम्पूर्ण प्रणालीको उपचार गर्दछ। उसको सबैभन्दा लोकप्रिय उत्पादनहरू पाचन, क्लोरोफिल र प्रोबायोटिक्सको लागि हो।
लियोनोरको पसल रिचमण्डको फ्ली मार्केटमा अवस्थित हुने गर्थ्यो, तर उनको शल्यक्रिया पछि उनले यसलाई आफ्नो घरको आराममा सारिन् जुन ग्राहकहरूको लागि पनि बढी निजी र गोप्य थियो। उनी यति ग्राहक केन्द्रित छिन् कि यदि उनीहरूले उनलाई अगाडि तिर्न सक्दैनन् भने ग्राहकहरू उनको खरीदको लागि किस्तामा भुक्तान गर्न सक्षम छन्। लियोनोर यति लोकप्रिय भएको छ कि व्यक्तिहरू उनीसँग भेट गर्न दिनहुँ उसको घरमा आउँदछन्।
पछिल्लो वर्ष उनी स्थानीय टिभीमा देखा पर्छिन्, लियोनारले भनिन् कि उनी अन्तर्वार्ता समाप्त हुने बित्तिकै कलहरूसँग डुबेकी थिइन।
"मानिसहरूले भने, 'यो तपाईको फोन नम्बर पाउनु कत्ति ठूलो आशिष्‌ हो!'," उनी हाँस्छिन्।
उनको सफल व्यवसायको माध्यमबाट लियोनोरले आफ्नो समुदायलाई निको पार्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेकी छिन र उनको भविष्यका लागि ठूला सपनाहरू छन्। "म मानिसहरूलाई अधिक सन्तुष्ट र स्वस्थ जीवन पाउन मद्दत गर्न बढी क्षमता र अधिक मान्यता प्राप्त गर्न चाहन्छु," उनी भन्छिन्। लियोनर पनि उनको क्षेत्रको नयाँ प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन, सम्मेलनमा उपस्थित हुन र सामाजिक मिडियाको साथ बचाउन चाहन्छ। उनी आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने र अरुलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धकको रुपमा प्रशिक्षण दिन आशा गर्छिन्।
अहिले, लियोनोर उनको श्रीमान्, एक वेल्डरलाई, उनीसँग व्यवसायमा काम गर्न प्रशिक्षण दिँदैछिन्। नाफारहित संस्थाहरूमा उनको रुचिले उनलाई राजदूत र कोषकर्ता बन्न प्रेरित गर्यो नयाँ अमेरिका 's पहिलो उद्यमशीलता वर्गको साथै खाडी क्षेत्र वरिपरिका विभिन्न गैर नाफामुखी संस्थाहरूलाई कोष र समय दान गर्नुहोस्। उनी भन्छिन् कि एमएएफबिना यी कुनै पनि कुरा कहिल्यै हुन सक्दैनथ्यो र उनी दिनहुँ आभारी छिन् कि उनको समुदायमा आमा प्रकृति बन्ने यो अद्भुत अवसर पाएको छ।
नयाँ लाठीथोवongs्गस्कोर्न: सपना देखि मेडिकल स्कूल सम्म
lending8 मा अगस्ट 13, 2014 द्वारा लिखित।
नयाँ एक भावुक जनस्वास्थ्य अधिवक्ता र युसीएसएफ मेडिकल स्कूलमा प्रवेश गर्ने पहिलो Undocumented विद्यार्थी हुनुहुन्छ
यो उच्च माध्यमिक विद्यालयको अन्त्यतिर थियो जब जिराउत "नयाँ" लाथिथोongs्गस्कोर्नले महसुस गरे कि उनी अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा प्रभाव पार्न चाहन्छन्। उनको आमालाई बेहोस हुनु र महत्त्वपूर्ण रगत गुमाउनुपर्दा सक्र्यामेन्टोको अस्पताल लगिएको थियो। उनीहरूले थाहा पाए कि उनलाई हेरचाह गर्न धेरै ट्युमरहरू छन्। नयाँका आमाबुवा हाल थाईल्याण्डबाट आएका आप्रवासी थिए र अंग्रेजी बोल्दैन थिए। उनका ठूला-साना भाइबहिनी काममा व्यस्त थिए, त्यसैले नयाँले परिवारलाई डाक्टरको भ्रमणमा अनुवाद गर्न, आफ्नी आमाको हेरचाह गर्न, र बीमाको मामिला सम्हाल्न जटिल स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मार्गनिर्देशन गर्न सहयोग गर्नुपर्‍यो।
"मलाई यस्तो लाग्यो कि म डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक भएको भए जस्तो हुन सक्थ्यो।"
नयाँ नौ बर्षको उमेरमा आर्थिक र सामाजिक बोझले उनीहरूलाई थाइल्याण्डबाट क्यालिफोर्निया सर्न बाध्य गरेपछि नयाँ आमाबुवाहरूले धेरै त्याग गरे। उसका अभिभावकहरूले रेष्टुरेन्टहरूमा धेरै घण्टा वेटर र कुकको रूपमा काम गर्थे ताकि अन्त सम्मिलित हुन सकून्। उनीहरूको अभियानले नयाँ उमेरमा युवालाई शैक्षिक रूपमा उत्कृष्ट हुन र अंग्रेजी भाषामा मास्टर गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो ताकि उनले अमेरिकी सपना प्राप्त गर्न सकून्। तर किनभने नयाँ अवस्थिति भएको थिएन, त्यस यात्रामा उहाँलाई पर्खिरहेका अनगिन्ती बाधाहरू अझै थिए।
क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका विभिन्न स्कूलहरूमा नयाँ लागू गरियो र यूसी डेविसमा रेजेन्ट्स छात्रवृत्तिसहित स्वीकार गरियो जुन प्राय जसो शिक्षण लागतहरू समेट्ने थियो। स्कूल वर्ष सुरु हुनुभन्दा ठीक अघि छात्रवृत्ति प्रस्ताव खारेज गरियो किनभने उनले आफ्नो कागजमा एउटा महत्त्वपूर्ण कागजात हराइरहेको थियो: ग्रीन कार्ड।
हुर्कदै गर्दा, नयाँ साथीहरू र ठूलो समुदायले उनको स्थितिको बारेमा पत्ता लगाउन डराएका थिए, तर यो फरक थियो। "यो संस्थागत अवरोधको बिरूद्ध मेरो पहिलो पटक आयो," उनले भने। नयाँ बरु सामुदायिक कलेज जानको लागि तयार थियो तर उनको परिवार यूसी बर्कलेमा एक वर्ष समर्थन गर्न आए।
त्यसपछि, उसले आफैंमा जारी राख्न कोषहरू खोज्नुपर्नेछ। "कलेजको दोस्रो वर्षमा म निराश हुन थाले," उनले भाग्यले भने, २०१० मा उनले छात्रवृत्ति पाए निष्पक्ष विचारका लागि शिक्षकहरू (E4FC), नाफामुखी संस्था जसले एक अमेरिकी कलेज शिक्षाको अनुसरणमा कम आय भएका आप्रवासी विद्यार्थीहरूलाई समर्थन गर्दछ। यो नयाँ आप्रवासी अधिकारहरूको लागि संगठित गर्न सक्रिय हुने गेटवे थियो।
E4FC, ASPIRE, र UC बर्कले क्याम्पसमा समूहहरू जस्ता समूहहरूसँग सामेल हुनुले नयाँ आँखाहरू खोलिदिएका विद्यार्थीहरूलाई स to्घर्ष गरिरहेकाहरूका लागि खुला पारे। जब उनी बर्कलेबाट स्नातक हुन पुगेका थिए, न्यूले मेडिकल क्षेत्रमा जाने आफ्नो लक्ष्यलाई अस्वीकार गर्‍यो तर उनीसँग अझै पनि धेरै प्रश्नहरू बाँकी रहेका थिए। "यो मेड स्कूल जान पनि सम्भव छ? म कहाँ आवेदन गर्ने थिए? मेरो इमिग्रेशन स्थितिको बारेमा कुरा गर्दा मेरो सम्भावनालाई कसरी असर गर्ने? " नयाँ उनले महसुस गरेका भ्रमलाई सम्झँदै भने।
"हामीले मेडोक स्कूलमा प्रवेश गरेका कसैलाई पनि अविश्वासको रूपमा चिनेनौं तर तिनीहरूले भने कि कसैले कसैको कुरा सुनेको उसले सुनेका थिए ... यो युनिकोर्न खोज्ने प्रयास जस्तै थियो।"
संरचना र समर्थनको अभावलाई समाधान गर्न नयाँ सह-स्थापना भयो पूर्व स्वास्थ्य सपना देख्नेहरू E4FC का दुई सहकर्मीहरु संग, दुई वर्ष पछि देशभर बृद्धि भईरहेको छ कि ग्रुप र स्वास्थ्य पेशेवर अध्ययन को लागी undocumented विद्यार्थीहरुलाई सशक्त बनाउन। स्नातक पछि, नयाँ स्वास्थ्य सेवा पहुँच र नीति सम्बन्धित संगठनहरु मा इंटर्नर गरिएको छ, जो उनी मेडिसिन को अभ्यास संगै सार्वजनिक स्वास्थ्य मा रुचि बढाउन को कारण। "मेरा बाबुआमा र साथीहरु undocumented छन् र जब तिनीहरू बिरामी हुन्छन्, उनीहरुको पहुँच छैन जुन हास्यास्पद हो।
म त्यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छु। " DACA पारित भएको लगत्तै, नयाँले Lending Circles र अन्य प्रोग्रामहरूको बारेमा सुने जुन अनुप्रयोगको लागत खर्च गर्न मद्दत गर्दछ। उसले DACA का लागि आवेदन गरिसकेको थियो तर ऊ क्रेडिट building निर्माणको बारेमा सिक्नमा इच्छुक थियो। अब जब उनी र उनका साथीहरूसँग एसएसएन नम्बरहरू छन्, Lending Circles मा सामेल हुन तिनीहरूलाई वित्तीय स्थिरताको बाटोमा सुरू गर्न मद्दत गर्दछ। नयाँले क्रेडिट निर्माण गर्न र उसको मेडिकल स्कूल अनुप्रयोगहरूको लागि भुक्तान गर्न आफ्नो loanण प्रयोग गर्‍यो। “यो धेरै सहयोगी भएको छ। अब मसँग राम्रो उधारो छ र एमएएफमा पैसा व्यवस्थापनको बारेमा प्रशिक्षणका माध्यमबाट धेरै कुरा सिकें, ”उनले भने। सबै नयाँ कडा मिहिनेतको भुक्तान गरियो किनकि उनी अब पहिलो Undocumented मेडिकल विद्यार्थी छन् जुन UCSF स्कूल अफ मेडिसिनमा स्वीकारियो।
एक हप्ताको दूरीमा, उनी रोमाञ्चकारी यात्राको सुरुको आशा गर्दैछ र प्रि-हेल्थ ड्रीमेर्स टर्चलाई नेताहरूको अर्को पुस्तामा पार गर्दैछ। अन्य Undocumented युवाहरूको लागि उसको सल्लाहको मुख्य अंश भनेको बोल्नु र मद्दत लिनु हो। "म यहाँ पुगेँ किनकि मसँग संगठनहरू छन् जसले मलाई अनावश्यक हुनको लागि प्रयोग गर्न मद्दत गर्‍यो," उनले भने। “एक एशियाली, Undocumented युवाको रूपमा, डर यति अधिक स्पष्ट थियो। मलाई थाहा छ यो के हो चुप लागेर मेरो जीवन र मेरो परिवारको परिभाषा। " नयाँ सल्लाहकारहरू खोज्नमा विश्वास गर्दछन् र अवसरहरू फेला पार्न मद्दतको लागि वकालत गर्दछन्। निर्णयहरू गर्दा लगनशील हुनु पनि उहाँको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
"त्यहाँ धेरै अनिश्चितता छ तर जवाफको लागि कहिले पनि लिनु हुँदैन। तपाईले थाहा पाउनु हुन्न जबसम्म तपाई कोसिस गर्नुहुन्न। म यसको प्रमाण जीवित छु। यदि मैले प्रयत्न नगरेको भए, मसँग अवसरहरू हुने थिएन थिए – म आज यहाँ हुने थिइनँ। ”
क्लाउडिया: अमेरिकी नागरिक बन्ने
lending8 मा जुलाई 24, 2014 द्वारा लिखित।
मेक्सिकोदेखि सान फ्रान्सिस्कोसम्म, यस स्टाइलिस्टले उनको सपना पछ्याउँछिन् र गर्वका नयाँ अमेरिकी नागरिक हुन्
ओकलल्याण्डको प्यारामाउन्ट थिएटरको बालकनीमा बसिरहेको भीडमा एउटा उत्साहको चर्चा थियो। परिवार र साथीहरूले हँसिदै अमेरिकन झण्डा फहराए र उत्साहित बच्चाहरूले फुलको गुलदुलाहरू समाते। यो जीवन परिवर्तन गर्ने प्रमाणपत्र र बधाई स्पिकरहरूको साथ एक स्नातक समारोह जस्तै थियो। तर यो एक नागरिकता समारोह थियो। केहि क्षणहरूमा तल तल सबैजना अमेरिकी नागरिक हुन्।
मञ्चमा अध्यागमन अधिकारीले छिट्टै हुने नागरिकलाई भने: “तपाईंको देश, प्रतिभा, चरित्र र व्यक्तित्वका कारण यो देश उत्तम स्थान हो। अमेरिका छान्नु भएकोमा धन्यवाद "
क्लाउडिया क्विजानो गर्वका साथ १ 00 countries देशका १,००3 अन्य आप्रवासीहरूसँग भाषण सुन्दै आएका थिए। प्रत्येक व्यक्तिलाई खडा हुन भनिएको थियो जब उनीहरूको जन्म भएको देश कहलाइन्थ्यो, जुन मा सबै दर्शकहरु खडा नभएसम्म दर्शकहरु खुशी हुनेछन्। अमेरिकाको पग्लने भाँडो यहाँ यस कोठामा गुआटेमाला, इजिप्टदेखि जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका सम्म थियो।
उक्त समारोहमा पूर्व विदेश सचिव माडेलेन अल्ब्राइट र राष्ट्रपति ओबामाले पठाएका नयाँ सन्देशहरूलाई नयाँ देशका नागरिकहरूलाई स्वागत गर्दै यस विशेषाधिकार र कर्तव्यको महत्त्वमा जोड दिइएको थियो। मुख्य वक्ता एक अध्यागमन न्यायाधीश र आर्मेनियाली र फिनिश आप्रवासीहरूका छोरी थिइन, जसले नागरिक संलग्नता र आफ्नो देशको सेवाको बारेमा कुरा गर्थे।
क्लाउडियाको यात्रा years बर्ष अघि, अगस्त २००, मा शुरू भयो, जब उनी आफैंले मेक्सिकोबाट सान्ता रोजामा बसाइन। उनले राजनैतिक शरणका लागि आवेदन दिए र त्यसको लगत्तै सान फ्रान्सिस्कोमा बसाइनुभयो। मेक्सिकोमा फर्केपछि क्लाउडियाले ब्यूटी स्कूलमा अध्ययन गर्छिन् र कपाल रंगाउने सम्बन्धमा भावुक भए। उनले १ 198 77 मा स्टाइलिंग शुरू गरेकी थिइन र उनको आफ्नै सलुन १ 199 own १ मा थियो। उनी संयुक्त राज्य अमेरिकामा सफलता खोज्ने सपना देख्छिन् तर उनी अन्य धेरै आप्रवासी र अमेरिकी नागरिकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर जान्छिन्।
"यो अविश्वसनीय छ। मेरो लागि, यो धेरै महत्त्वपूर्ण दिन हो। यो मेरो जीवनमा मेरो लागि सब भन्दा महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रतिनिधित्व गर्दछ, "उनले भनिन्।
जब क्लाउडिया पहिलो पटक अमेरिका आइपुगे, उनलाई कानुनी निवासको लागि सही कागजपत्र प्राप्त गर्न समस्या भइरहेको थियो। उनले एक वकिल प्राप्त गरे जसले उनको स्थायी निवासी बन्न मद्दत गरे तर उनले पत्ता लगाए कि उनी नागरिक नभएको कारण उनले चाहेको किसिमका कामहरू सुरक्षित गर्न अझै गाह्रो छ। तर क्लाउडिया निरुत्साहित भएनन्।
उनले मिशन डिस्ट्रिक्टको एक सलुनमा स्टाइलिस्टको रूपमा काम गरे जब उनले Mission Asset Fund र नागरिकता कार्यक्रम को लागी Lending Circles, जसले संसाधन र $680 नागरिकता आवेदन शुल्कको लागि कोषमा पहुँचको साथ महत्वाकांक्षी नागरिकहरू जोडे। उनी आफूलाई धेरै आवश्यक पर्ने जानकारी प्रदान गर्न एमएएफले सक्षम भएकी थिइन्।
"त्यहाँ सबैजना खुशी थिए र मलाई धेरै मद्दत गरे," उनले हाँस्दै भनिन्।
जनवरी २०१ 2014 मा, क्लाउडिया नागरिकताका लागि लेन्डि C सर्कलमा भर्ना भइन् र उनको चेक $680 आवेदन शुल्कको लागि प्राप्त भयो। उनले आवेदन प्रक्रिया "सजिलो" को रूपमा वर्णन गरीयो किनभने MAF र अन्य गैर नाफामुखी संस्थाहरुको संलग्नता र समर्थनको कारण।
क्लाउडिया धेरै सुविधाहरूमा उत्साहित छन् जुन एक नागरिकको रूपमा आउनेछ, तर मतदान गर्ने अवसर पहिलो छ।
"मसँग अहिले थुप्रै जिम्मेवारी छन्," उनले भनिन्। "सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको म मतदान गर्न र आफ्नो जीवन सुधार गर्न सक्दछु।"
उम्मेदवारहरूले राष्ट्रिय गान सुनाए र त्यसपछि नागरिकताको शपथ र निष्ठाको वाचा पनि गरे। त्यो क्षण क्लाउडियाका लागि भावनात्मक थियो।
“म समारोहमा झन्डै रुन्थें। मेरो मनपर्ने भाग सबैको साथ गान गाउँदै थियो। हामी सबै गाउँदै थियौं र खुशी महसुस गरिरहेका थियौं, "उनले भनिन्।
उनको सल्लाह अन्य आप्रवासी र महत्वाकांक्षी नागरिकहरूलाई तपाईंको सपनाहरूको लागि लड्न र हार नमानी हो।
"आफैंमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईंलाई मद्दत गर्न ठाउँहरू खोज्नुहोस्," उनले भनिन्।
उक्त समारोह स्थानीय गायकले दुईवटा क्लासिक अमेरिकी लोक गीतहरू, "अमेरिका द सुन्दर" र "यो भूमि तपाईंको भूमि हो" संगै बन्द भयो।
क्लाउडियाको लामो समयको मित्र, मारिताजा हर्डोसिया, उनको उपलब्धि मनाउन समारोह पछि उनको साथिन। क्लाउडियाले विगत आठ बर्षमा उनको लागि मुख्य समर्थनको रूपमा मार्किटाको नाम राखिन्।
क्लाउडियाका लागि अमेरिकी नागरिक बन्नु भनेको बढी अवसरहरू खोल्नु हो। वर्षौंसम्म, उनले हेयर स्टाइलिस्टको रूपमा काम गरिरहेकी छिन्, सान फ्रान्सिस्कोको सानो सैलुनमा कुर्सीहरू भाडामा लिएकी छिन्। तर अब उनी एक नयाँ अमेरिकी छिन्, उनी अझ ठूलो कुरा लिन तयार छन्: आफ्नै ब्युटी सैलुन खोल्दै।
सानो प्लेट्स, ठूलो हार्ट
lending8 मा जुलाई 21, 2014 द्वारा लिखित।
कसरी म्याफको माइक्रोलोन्सले साना प्लेटहरू ठूलो व्यवसायमा बदल्न सक्छ भनेर फेला पार्नुहोस्
बिचमा ला कोकिनामिशन डिस्ट्रिक्टको ठूलो भान्छामा, एक साना महिला हंसको सुन्दरताका साथ सारिन्।
स्टीमिंग ट्रेहरू, उमालेको भाँडा, र न्यानो हावा जस्तै उकालो प्यानहरू बीच ग्लाइडि sme, उनी गन्धित थियो, स्वाद पाउँछिन्, र सबै चीजहरू सपना जस्तो धमिलोपनामा राख्छिन्। उनको वरिपरि तीन अन्य महिला थिए, सबै एक राम्रो प्रशिक्षित नृत्य दल को सोचाइ sy sykronicity संग चलिरहेका। प्रत्येक महिलाले भाँडा र प्यानहरूको अर्केस्ट्रामा कार्यहरूको सिम्फनी सञ्चालन गरिरहेकी थिइन्।
Ximena र म interlopers जस्तै महसुस जब हामी भान्छा मा प्रवेश र ग्वाडालुपे लागि सोधे। तर कुनै हराएनन्, स्ट्याट आइमाईले प्यानमा अलिकति नुन छिर्की र गर्वका साथ हामीतिर आईन्।
"आह", उनले भनिन् "हामीले तपाईलाई गएको हप्ता सम्झ्यौं।"
Ximena र मैले उसलाई मा भ्रमण गर्न सक्षम छैन को लागी माफी मागे एल पिपिला पालमा ग्रिड बन्द, स्यान फ्रांसिस्को हब सबै भन्दा राम्रो खानाको लागि शहरले प्रस्ताव गर्नुपर्दछ।
"यो ठीक छ," उनले आफ्नो हातले हल्का हुँदै कहा।
“म यति व्यस्त थिएँ कि म कसैसँग कुरा गर्न सक्दिनँ!” उनले एक जिग्लैसँग भनिन्। ग्वाडालुपेका लागि जीवन आज जस्तो राम्रो थिएन।
जब ग्वाडालुपे मेक्सिकोको सानो शहर अकबारोमा सानो छँदा उनको ठूलो मायालु परिवार थियो।
उनका बुबा, अरू धेरैले जस्तै, उनीहरुलाई छोडेर संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा गर्नुपर्‍यो। ऊ आमाको लागि जति सक्दो पैसा पठाउँथ्यो ताकि त्यसले बच्चाको हेरचाह गर्न सकी। उसको स्थितिको कारण, उहाँ उनीहरूसँग भेट्न सक्नुहुन्न, र गुवाडालुपको बाल्यावस्थाको राम्रो अंशको लागि तिनीहरूबाट अलग बस्नुपर्‍यो। १ 198 66 मा, उनको बुबाले एक निर्बाध व्यक्तिको रूपमा माफी पाए र २०० 2004 मा उनी अन्ततः नागरिक भए। दुर्भाग्यवश, ग्वाडालुपे र उनका भाइबहिनीहरू आफैंले नागरिकता लिन असमर्थ थिए, किनकि उनीहरू १ 18 भन्दा बढि उमेरका थिए।
उनको बुबाले जस्तै गुआडालुपेले आफ्ना दुई छोरीहरुलाई अमेरिकाले प्रदान गरेको अवसरहरुमा पछाडि छोडिदिए। आफ्ना छोरीहरूलाई बिदाइ गर्न आएको कुरा सुनेपछि उनका आँखामा आँसु थाम्न थाल्छन्। उनी आफ्ना साना केटीहरूलाई छोड्नु पर्ने क्षण सम्झन्छिन्, कसरी उनी जान्थिन् कि उनी कहिल्यै उनीहरू हुर्कने, स्कूल जाने वा उनीहरूको पहिलो नृत्यमा देख्दिनन्।
उनी तुरुन्तै आफैं रच्छिन्, पछि घुम्छिन् र पछाडि पकाइरहेका आइमाईहरू मध्ये एकलाई दर्साउँछिन्।
"यो मेरो छोरीहरु मध्ये एक हो", उनी गर्वका साथ भन्छिन्। महिलाले हामीलाई गुवाडालुपको जस्तै उस्तै मुस्कान दिन्छ। उनको छोरी केवल अर्को शेफ मात्र होइन, तर व्यापारमा साझेदार छिन्।
ग्वाडालुपेको साथ भान्छामा अन्य महिलाहरू उनकी आमा थिइन्, जो उनको छोरीले निर्माण गरेको व्यवसाय हेर्न आएका थिए। गुआडालुपेकी छोरी पनि त्यहाँ थिइन्, आफ्ना आमासँगै। महिलाको तीन पुस्ता, सँगै, सांस्कृतिक परम्परा र गृहनगर स्वादहरूमा आधारित एक व्यवसाय निर्माण।
ग्वाडालुपे निर्मित उनको व्यवसाय, एल पिपिला, भुमिबाट। एक दिन उनको साथी एलिसियाले उनलाई नभईन्जेल उनले रेस्टोरेन्ट कारोबारमा प्रायः सबै कामहरू गरिरहेकी थिईन्, "तपाईंले भर्खर एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नु पर्छ।" त्यहाँबाट उनले Mission Asset Fund मा उनको उधारो र वित्त निर्माण गरे, ला कोकिना इन्क्यूबेटर प्रोग्राम मार्फत गए, र एमएएफको एक माइक्रोलोन प्राप्त गरे। जब उनले आफ्नो व्यवसाय शुरू गरे यो केवल उनको मात्र हो। अब, उनले आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई एक तरीकाले वा अर्कोमा रोजगार गर्छिन्।
गुआडालुपका लागि पकाउने जहिले पनि एक पारिवारिक मामिला भएको छ, र आजको दिन पनि फरक थिएन। ग्वाडालुपे चिन्ता र विचारबाट बहिष्कृत भैरहेकी छिन् कि उनले कसरी उनी र उनकी आमाले सुरुदेखि नै रमाइलो टारटिलाहरू बनाउँछिन् र अब, उनी र उनका छोरीहरूले पनि त्यसो गर्छन्।
उनी आफ्ना भाइबहिनी र आमासँग भान्साकोठामा बिताएको सबै समय रमाईलो सम्झन्छिन्। प्रत्येक बच्चाको एक विशिष्ट कर्तव्य थियो र यसलाई सँधै सक्दो चासो लिन्छ। उनीहरूको लागि खाना केवल भरणपोषण थिएन, यो परिवारको प्रेम थियो मूर्त र स्वादिष्ट।
MAF को एक microloans को साथ, ग्वाडालुपे उपकरण खरीद गर्न सक्षम थियो र आंशिक उनको समृद्धि खानपान व्यवसाय को लागी एक भ्यान को लागी तिर्न। उनी हामीलाई बताउन सावधान छिन् कि उनले अहिले राम्रो गरिरहेकी छन्, जब उनले शुरू गरे कि उनलाई लाग्यो कि केटरि business व्यवसायले कहिले पनि यो बनाउने छैन। उनको खाना तुरुन्तै समात्न सकेन त्यसैले उनी धेरै धैर्यवान हुनुपर्छ। यसले उनलाई केहि महिना लिए, तर मानिसहरूले उनको बुथमा आउन र घटना र डिनर पार्टीहरूको लागि अनुरोध गर्न थाले।
उनी अब सपना देख्छिन् कि एक दिन एउटा सानो फूड स्ट्यान्ड छ, एउटा इट्टा र मोर्टार स्थान जुन परिवारहरू आउन सक्दछन्। जब उनले सोध्यो कि उनले यो किन गरिरहेकी छिन्, उनी आफ्नी छोरीलाई फर्केर हेर्छिन् र भन्छिन्, "म यो उनको र दिदीको लागि गर्दैछु। म पक्का गर्न चाहन्छु कि ती दुवैले आफैंका लागि मात्र काम गर्नुपर्दछ ”।
माइक्रोलोन स्पटलाइट: एल्भिया बुन्डिया, कप केक बॉस
lending8 मा जुन 24, 2014 द्वारा लिखित।
इल्वियालाई मिठाई मन पर्थ्यो, त्यसैले उनी आफ्नो मुटुको अनुसरण गर्दै र आफ्नै कप क्याक पसल खोल्छिन्!
एल्भिया बुन्डिया मेक्सिको सिटीको बाहिरी भागको सानो शहरमा हुर्केकी थिइन। Children बच्चाहरू मध्ये कान्छीको रूपमा, उनी एक सुरक्षा, मायालु, मध्यम-आय परिवारमा हुर्केका थिए। उनलाई मिठाईहरूप्रति जुनसुकै चाख थियो जुन आफ्नी आमासँग किचनमा समय बिताउनबाट रोकिन्थ्यो जसले स्वादिष्ट घरका बनाउने पेस्ट्रीहरू र केकहरू चाख्नको लागि फार्म-ताजा सामग्री प्रयोग गर्छिन्।
इल्वियाले कम्प्युटर प्रोग्रामिंगको अध्ययन तीन वर्ष गरे र त्यसपछि बिहे भयो। केही वर्ष पछि, उनी र उनको पतिले निर्णय गरे कि उनीहरुका परिवारले अझ बढी अवसर पाओस् र सान फ्रान्सिस्कोमा बसाइँ सरे।
इल्वियाले सोचे कि उनी घरमा आफ्ना बच्चाहरूसँगै बस्न र कम्प्युटर प्रोग्रामरको रूपमा घरबाट काम गर्न सक्षम हुनेछन्। उनलाई स्थिर काम पाउन गाह्रो भयो र उनले निर्णय गरे कि आफ्ना बच्चाहरूको लालनपालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु राम्रो हुन्छ। एक दिन, उनको छोराले उनलाई के गर्न मन पराउँछन् भनेर सोधिन्, उनले उत्तर दिइन्: "बेकि।।"
र जब सबै परिवर्तन भयो।
पछि इल्वियाले आफ्नो परिवारको लागि बनाएको पहिलो केक राम्ररी बाहिरिन किनभने उनले सेल्सियस र फारेनहाइट खाना पकाउने विधिमा मिक्स गरिदिए।
“मलाई थालमा केक फ्याँकिएको सम्झना छ र यो एक थाम्पले खसेको थियो। मेरो छोराले त्यसपछि कराई, 'हेर, मम्मीले टायर बनायो!' ”उनी हाँस्दै भन्छिन्।
त्यस पछि, एल्भियाले केक सजावट र बेकिंग क्लासहरू सोखको रूपमा दर्ता गर्‍यो। एक पटक उनी साथीहरू र पार्टीहरूमा उनको केक लिन शुरू, मान्छे उसलाई उनको केक पनि बनाउन चाहन्थे।
"त्यसबेला मैले सोचें कि ओह, मैले व्यापार शुरू गर्न सक्दछु!" एल्भिया भन्छन्।
तर व्यापार सुरु गर्नु सजिलो थिएन। इल्भियासँग त्यस समयमा धेरै hadण थियो तर मद्दतको लागि १ टीटी T टी आएपछि उनलाई माइक्रोलोनको लागि आवेदन दिन प्रोत्साहन दिइयो। उनले $5000 loanण प्रयोग गरी फ्रिज, ब्यापार इजाजतपत्र र आफ्नो बेकरी बढाउनको लागि आवश्यक धेरै संख्यामा लगानी गर्न, ला लुना कपकेक्स।
घरमा बनाएको मिठो बनाउने प्रायः सबैलाई विलासिताजस्तो लाग्न सक्छ, तर एल्भियाका लागि यो उनको दिनको अनिवार्य अंश हो र कुनै कुराले उनी विश्वास गर्छिन् यदि उनीहरूले वास्तवमै आनन्द लिन्छन् भने कोही पनि गर्न सक्दछन्।
उनी आफ्नो कपकेकहरू र केक पपको लागि ताजा, प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गर्नमा विश्वास गर्दछिन जसरी उनको आमाले उनलाई सिकाउनुभएको थियो।
रातो मखमल, मोचा चकलेट, हनीमून क्रैनबेरी सुन्तला, एल्भियाले प्रदान गर्ने स्वादिष्ट स्वादहरूमध्ये केही मात्र हुन्। La Luna Cupcakes अनलाइन अर्डरको रूपमा शुरू भयो र ला कोकिना इन्क्यूबेटरबाट बाहिर काम गर्‍यो। इल्वियाले अर्डरहरू वितरण गर्छिन् र विशेष घटनाहरू आफैंमा पूरा गर्थे।
२०१ 2013 मा, ला लुना कपकेकहरू शहर स्यान फ्रान्सिस्कोको क्रोकर ग्यालरियामा एक भौतिक स्टोरमा सर्न सक्षम भए। एल्भियाले उनीसँग काम गर्न employees जना कामदारहरू पनि भाडामा लिएकी छिन्, जसमा उनका पति पनि गत डिसेम्बरमा सामेल भए!
इल्वियाको जीवन उनले सपना देखेको भन्दा धेरै फरक छ।
व्यापार चलाउनु आर्थिक तनावपूर्ण हुन सक्छ बिक्री र बढावा को चुनौतिहरु संग, तर उनी भन्छिन् उनी एक सरल र सजिलो जीवन छ। उनको विवाह भएको २ 25 वर्ष भइसक्यो र उनका दुई बच्चाहरू छन्- २२ वर्षीया छोरी र १ 16 वर्षको छोरो। यी सबै बर्ष पछि पनि, गर्न मनपर्ने कुरा ओभन खोल्न र ताजा कप केकहरू गन्ध छ।
इल्भिया मुस्कुराउँदै भन्छिन्, “यसले मेरी आमासँग मैले उनको भान्छामा बिताएको सबै समयको बारेमा सोच्न बाध्य पार्दछ।
यस डिसेम्बरमा, इल्वियाले आफ्नो offण चुक्ता गरिन र ला लुना कपकेकहरू विस्तार गर्ने आशामा छिन। उनको लक्ष्य अरू दुई स्थानमा स्टोरहरू खोल्नु हो र उनी आफ्ना बच्चाहरूलाई उनको व्यवसायलाई निरन्तरता दिन प्रेरणाको रूपमा उल्लेख गर्छिन्।
"मैले तिनीहरूलाई सँधै सिकाएँ यदि तपाईं केहि चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ! तपाईको सपनामा विश्वास गर्नुहोस्! "
क्यालिफोर्निया सपना: DACA र एक अमेरिकी सपना को बनाउने
एमएएफ सदस्य जु ह Hong्ग, श्री हाइफन र अमेरिकी सपनाको बारेमा कुरा गर्छन्।
जु हांग केही सीमितताको मानिस हो। उनी हार्वर्ड युनिभर्सिटीका अनुसन्धान सहायक हुन्, नेशनल अनडाकमेन्ट रिसर्च प्रोजेक्ट (एनयुआरपी) मा, लेनी कलेज क्याम्पसमा पुरुष केन्द्रका संयोजक, सान फ्रान्सिस्को स्टेट युनिभर्सिटीका स्नातक विद्यार्थी र श्री हाइफनको ताजका साथ।.
जु अमेरिकी सपनाको आदर्श हो, जु अवस्थितिमा छैन। उनी दक्षिण कोरियाबाट संयुक्त राज्य अमेरिका आए जब उनी आफ्नी आमाको साथ कान्छी थिए जसले आफ्ना बच्चाहरूको लागि अझ राम्रो जीवन चाहन्थे।
“मेरी आमा रेस्टुराँमा दुईवटा काम गर्नुहुन्छ, दिनको बाह्र घण्टा, हप्ताको सात दिन, र उनी यस देशमा आएदेखि छुट्टी कहिल्यै पाइनन्। उनी कडा छिन, "जु भन्छिन्।
एक Undocumented विद्यार्थीको रूपमा, जू काम पाउन, आर्थिक सहायता पहुँच गर्न, र ड्राइभर इजाजतपत्र प्राप्त गर्न असमर्थ थियो। जुले आफ्नी आमाको उदाहरण लिए र निर्णय गरे कि उनी आफूले सकेसम्म कडा मेहनत गर्दैछिन उनको गर्व गर्नलाई। त्यो हो जब जु द्वारा आयोजित प्रतियोगिताको बारेमा सुने हाइफन पत्रिका। यस प्रतिस्पर्धा संग, उनले undocumented आप्रवासी जनसंख्या को जीवन मा दृश्यता ल्याउने एक मौका देखे।
दृश्यता सिर्जना गर्दै
"हाइफन पत्रिका एक महत्वपूर्ण आप्रवास मुद्दा हाइलाइट गर्न एक उत्तम अवसर थियो. सात मध्ये एक कोरियाली आप्रवासी undocumented छन्। एशियाईहरू अब यो देश मा नयाँ आप्रवासी को सबै भन्दा ठूलो समूह हो। AAPI समुदायले यो मुद्दालाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। वास्तवमा, AAPI समुदाय कुराकानीमा संलग्न हुनुपर्छ र निष्पक्ष र मानवीय व्यापक आप्रवासन सुधारको लागि जोड दिन प्रयासहरु मा सामेल हुनुपर्छ। "
संयुक्त राज्यमा ११ करोड अप्रमाणित व्यक्तिहरु मध्ये १ 1. लाख एसियाली रहेका छन् जस मध्ये धेरै युवाहरु जसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै जसो आफ्नो जीवन बिताएका छन्। तर यसको लागि लागू गर्न केवल $680 लागत छ बचपन आगमनको लागि आस्थगित कार्य, ह Hong्ग जस्तो मेहनती परिवारहरूको लागि बाटोमा खडा एक पर्याप्त बाधा।
जब जु पहिलो Mission Asset Fund मा आए उनले अब उनिले आफ्नो क्रेडिट निर्माण गर्ने उपाय खोज्दै थिए DACA अनुप्रयोग अनुमोदन गरिएको थियो, र वित्तीय सफल हुन उसलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा। लेन्डि C सर्कल प्रोग्रामको दौरान जुले आर्थिक कौशल, पैसा र क्रेडिट आवश्यक पारे।
“मैले १ टीटी TP टी कार्यक्रमका लागि पाँच अन्य Undocumented विद्यार्थीहरूका लागि आवेदन दिने निर्णय गरें। लेन्डि C सर्कलले मलाई क्रेडिट, loanण कार्यक्रमहरू र सामान्यतया फाइनेन्स बुझ्न सक्ने अवसर दिएको छ।
जुले DACA प्राप्त गर्‍यो, उनको कामको अधिकार र ड्राइभर इजाजतपत्र। अब, जू भविष्यको लागि योजना बनाउन शुरू गरेको छ। ऊ अबउपयोगी भएको कलंक र दबाब महसुस गर्दैन, र उनी पक्का गर्न चाहन्छ कि कोही पनि त्यस्तो महसुस नगरून्। उनले सैन फ्रांसिस्को राज्यमा स्नातकको अध्ययन पूरा गरेपछि, उनी आप्रवासी समुदायहरूलाई स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक सेवाको माध्यमबाट सुखी बनाउने योजनामा छन्।
यो एक सपना हो जुन उनको आमाको लागि उनको प्रशंसाबाट चल्दछ। "मेरी आमा मेरो सबैभन्दा राम्रा साथी, मेरो सल्लाहकार, र मेरो आदर्श हुनुहुन्छ। एक दिन, म आफ्नो आमाजस्तै हुन चाहन्छु, जोखिम लिने, कडा परिश्रम गर्ने, र कहिल्यै सपना नत्याग्ने।
Itzel: एक DREAMer एक फरक बनाउने
lending8 मा डिसेम्बर 31, 2013 द्वारा लिखित।
मलाई लाग्छ चीजहरू ठूलो हुँदै जान्छन र हामी पछाडि फर्केर हेर्दै छौं, हौं, हामीले भिन्नता गरेका छौं
Itzel सधैं उनलाई थाहा थियो उनी undocumented थियो, उनीले सबै जीवन भर जान्दछन्। उनको हैसियतले उनको जीवनलाई वास्तवमा ठूलो प्रभाव पारेको थिएन। उनी हाईस्कूलमा खुसी थिइन, र ड्राइभर इजाजतपत्र आवश्यक पर्दैनथ्यो किनभने ऊ कार लिन सक्दिन। उनको जीवनमा सबै सही मार्गमा हिँड्दै थिए, तर जब उनी अठार वर्षको भए, परिस्थितिले अप्रत्याशित मोड लियो।
नौ अंकहरू जसले उनको भविष्यलाई अवरोध पुर्‍यायो।
जब Itzel कलेज को लागी आवेदन गर्न गयो, उनी पहिलो पृष्ठ पछाडि जान असमर्थ थिए। उनीसँग उत्कृष्ट ग्रेडहरू थियो, उनीसँग उनको शिक्षकको समर्थन थियो, उनले राम्रो स्कूलमा प्रवेश पाउन तपाईंले गर्नुपर्ने सबै कामहरू गरिन्। तर पतनमा युसी बर्कले वा स्ट्यानफोर्डमा भाग लिने उनको सपनाहरू सामाजिक सुरक्षा नम्बरको अभावले रोकियो। आवेदन भर्न इट्जेलसँग सामाजिक सुरक्षा नम्बर छैन र उनले महसुस गरे कि उनी स्कूलमा आवेदन दिन सक्दिनन् जुन उनी आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको लागि हेर्दै थिए। उनले यो सीमितता दिन अस्वीकार गरे, र जब उनको परिवारले सवार्यो उनले सामुदायिक कलेजमा भर्ना भए।
इट्जेल निस्सन्देह थिई, र आफ्ना सपनाहरूको पछि लागिन।
जब उनी ओरेगनको घरबाट स्यान फ्रान्सिस्को सरेकी छिन् उनले शहर कलेजमा भर्ना गरिन। राज्य विद्यार्थीको रूपमा बाहिर उनको फीस कहिले काँही तिगुना हुन्छ स्थानीय विद्यार्थी तिर्दै थिए। अन्य विद्यार्थीहरूको विपरीत, उनी परम्परागत loansण, वित्तीय सहायता, वा अन्य विद्यार्थी सेवाहरूको पहुँच गर्न सक्दिनन्। उनको लागि, यो उनको शिक्षा जारी राख्न तिर्नु पर्ने सानो मूल्य थियो। स्कूलमा उनले उनको जस्तो सपना देखी नयाँ प्रोग्रामको बारेमा सुनेकी थिइन्। DACA उनको सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्राप्त गर्ने अवसर थियो जसले उनलाई कलेजमा आवेदन दिन प्रतिबन्ध गरेको थियो। एक पटक DACA शुरू भयो, यो Itzel को जीवन परिवर्तन भयो। उनी DACA को लागी आवेदन गर्न सक्षम भइन् DREAMers कार्यक्रम को लागी Lending Circles मा सम्मिलित भई, जहाँ उनीले loansण र सामाजिक loansण मार्फत वित्तीय सहायता प्राप्त गरे, र उनको पहिलो काम अनुमति प्राप्त भयो.
DREAM लाई जीवित छ।
अब इट्जेल एक बर्षको लागि एक नागरिक र स्यान फ्रान्सिस्को निवासीको रूपमा इन-स्टेट ट्यूशन तिर्न सक्षम हुनेछ। उनले आफ्नो जीवनभर मेहनत गरिसकेकी छिन्, र उनले अमेरिकी सपना साकार गर्न कडा मेहनत गरिन। उनी Undocumented युवाहरू के हुन सक्दछन् भन्ने उदाहरण हुन् भनेर गर्व गर्दछिन्, र DREAMer आन्दोलनले भविष्यमा हासिल गर्न सक्ने कुरामा आशावादी छिन्। "मलाई लाग्छ चीजहरू ठूलो हुँदै जान्छन र हामी पछाडि फर्केर हेर्नेछौं, हो, हामीले भिन्नता गरेका छौं।"